အဘယ်ကြောင့် 2016 မိုဘိုင်းစီးပွားရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိပ်ဆုံးအချက်ဖြစ်လိမ့်မည် | Martech Zone
အန္တာတိကရှိသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မိုဘိုင်းဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နေကြသည်။ ဆီးရီးယားရှိမိဘများသည်နည်းပညာအလွန်အကျွံသုံးခြင်းဖြင့်ကလေးများအတွက်စိုးရိမ်သည်။ အမေရိကန်ဆာမိုအာကျွန်းရှိကျွန်းသားများသည် 4G နှင့်ဆက်သွယ်ကြပြီး ၇၅ ပေါင် ၀ န်းကျင်တင်ဆောင်နေစဉ်တွင်နီပေါနိုင်ငံရှိ sherpas များသည်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်စကားပြောကြသည်။
မိုဘိုင်းစီးပွားရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Tipping အချက်သို့ရောက်ရှိ.
Ericsson နှင့် TUNE မှအချက်အလက်များဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများ
ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တချိန်လုံးကြားရသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်ယခုနှစ်စမတ်ဖုန်းဖြင့်မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူသန်း ၈၀၀ ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သန်း ၆၀၀ ထပ်မံတိုးချဲ့မည်။ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများနှင့်ထပ်ပေါင်းထည့်ပါ၊ ၂၀၂၀ တွင်ဒီကလပ်အသင်းဝင် ၆.၅ ဘီလီယံရှိလိမ့်မည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ၄၇% ခန့်တွင်စမတ်ဖုန်းရှိကြောင်းသိရသည် Ericsson ဒေတာ။ 2016 ခုနှစ်တွင်ထိုအရေအတွက်ကနီးပါး 50 ဘီလီယံနီးပါးချဉ်းကပ်, 4% အမှတ်အသားအတိတ်မှုတ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်လက်ရှိလူ ဦး ရေ ၇.၃ ဘီလီယံရှိတဲ့ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေထက်ပိုမြန်သည်။
TUNE သည်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံများထက်မဆိုအိန္ဒိယမှ m- ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းများကိုပိုမိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမေရိကန်ရှိသန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသောစမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများအပြင်၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာ၏အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်မိုဘိုင်းသုံးစွဲမှု၏ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်သုံးစွဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ m-commerce ၏လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုနှုန်း ပြီးခဲ့သည့်လေးလပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းကမ္ဘာတွင် m-commerce ၏ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ role (တရုတ်၊ အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ) ... ကျွန်ုပ်တို့သည် developer များတီထွင်ခဲ့သောမိုဘိုင်းပြောင်းလဲမှု၏အဓိကကျသောအချိန်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ဆီသို့ ဦး တည်အလုပ်လုပ်သည်စျေးကွက်များအကြောင်းကိုကြားနာခဲ့ကြနှင့်အမှတ်တံဆိပ်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။
As GameStopဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ app ကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များသည်သင်၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးသစ္စာရှိကလပ်ဖောက်သည်နှစ်ဆရှိသင့်သည်။ ပြီးတော့မိုဘိုင်း - ပထမဆုံးစီးပွားရေးကအခွင့်အလမ်းသစ်အမျိုးမျိုးကိုဖွင့်ပေးတယ်။ Uber, AirBnB, Amazon စသည့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်၎င်း၏ပထမဆုံးအရိပ်အမြွက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ နောက်လှိုင်းတစ်ခုမှာ Sephoras၊ Sonys, Staples နှင့်အခြားကြီးမားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းတို့၏နောက်လိုက်များ၊ သုံးစွဲသူများ၊ မျိုးနွယ်စုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်ဆံရေးကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပြီး… သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမိုဘိုင်း ဦး စားပေးစီးပွားရေးမှာတောင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဂိမ်းတွေကကြီးမားတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးဝယ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လူနေမှုပုံစံစသည့်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းများပေါ်ထွက်လာသည့်မိုဘိုင်းစီးပွားရေးကိုမြင်တွေ့နေရသည်။
Amazon ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဖြန့်ချိရေးစင်တာတွင်နာရီအနည်းငယ်သာနေထိုင်သော Staples မှရုံးသုံးပစ္စည်းများကို Uber မှသာအချိန်မီဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်အနာဂတ်နှင့်မဝေးပါ။
မိုဘိုင်းဂိမ်းကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Supercell, Kabam, Machine Zone, Electronic Arts နှင့် King စသည့်မိုဘိုင်းဂိမ်းများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်မည်သို့ ၀ င်ငွေရှာရမည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးပြသခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်ပေါင်း ၂ နှစ်မျှအတွင်း၌ပင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများကို ၀ ယ်ယူရန်ဒေါ်လာ ၇၀-၁၀၀ ဘီလီယံသုံးစွဲလိမ့်မည် $ 500-550 ဘီလီယံ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်မှ ၀ ယ်ယူပြီးဖြစ်သော်လည်းတကယ့်အဆင့်တွင်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာသို့ဖြန့်ဝေပေးသည့် virtual မဟုတ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ဒီအဖြစ်မှန်မှာ mobile-first ဖြစ်ခြင်းသည်ရှင်သန်ခြင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီ post ကအစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံသည် တေးသံ.
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းမီတာ-Commerceမိုဘိုင်း app များမိုဘိုင်းစီးပွားရေးပထမ ဦး ဆုံးမိုဘိုင်းမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစမတ်ဖုန်းအသံညှို